SocialTV = Muuqaal + Bulsho + Interactive | Martech Zone
Arbacada, Agoosto 15, 2012 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Tikniyoolajiyadda fiidiyowga ayaa cirka isku shareeray… laga soo bilaabo muuqaalka isha, illaa shaashadaha waaweyn, illaa 3D, AppleTV, Google TV… dadku way wadaagayaan oo cunayaan fiidiyowyo aad u tiro badan abid taariikhda. Ku darnaanta kakanaanta ayaa ah shaashadda labaad - la falgal kaniiniga ama aaladda gacanta inta aad telefishanka daawaneyso. Tani waa soo bixitaankii SocialTV.
In kasta oo daawadayaasha telefishanka dhaqankoodu hoos u dhacayaan, haddana SocialTV wuxuu muujinayaa ballanqaadyo badan. SocialTV wuxuu sii kordhinayaa daawashada, caawinta dallacaadda iyo xitaa wadista iibka tooska ah. Fursadaha ayaa ah kuwo aan dhammaad lahayn oo leh SocialTV barnaamijyaduna waxay sii wadaan inay ku bilaabaan xawaare aad u weyn. Xarumaha telefishanada dhaqameed ma fadhiisan doonaan halka dakhliyada ay u wareegaan kanaalada khadka tooska ah, SocialTV waxay siisaa fursad ay dakhliga ku sii hayaan kuna koraan.
Shirkadaha qaar iyo tikniyoolajiyadooda barta bulshada ee SocialTV:
diyaarad - Ka gal marinnada hawada ee maxalliga ah - dhammaan shabakadaha waaweyn ee baahinta iyo in ka badan 20 kanaal oo kale - tayo HD ah.
Boxee - wuxuu si otomaatig ah ugu soo gudbiyaa talooyinka fiidiyowga asxaabtaada Facebook iyo Twitter-ka TV-gaaga wuxuuna kuu oggolaanayaa inaad waxyaabo la wadaagto iyaga oo riixaya barta fog.
Kalluunka sanduuqa - Kalluumeysiga ayaa qabta eray kasta oo telefishanka laga hadlo, sida uu u dhaco. Waxay ka baaraandegaan xogta waqtiga-dhabta ah waxaanna u adeegsanaa sidii lakab cusub oo daah-fur ah oo loogu talagalay TV-ga iyadoo la adeegsanayo kiniin (hadda waa codsi iPad).
ConnecTV - wuxuu iskuxirayaa hogaaminta shabakadaha bulshada, astaamaha bulshada gaarka ah, iyo waxyaabaha udiyaar garoobay oo u ogolaanaya dadka isticmaala inay kula sheekaystaan ​​daawadayaasha kale iyagoo daawanaya bandhigyada aad ugu jeceshahay.
GetGlue - sida Foursquare kuu ogolaado inaad iska hubiso meelaha, GetGlue wuxuu kuu ogolaanayaa inaad dhisto shabakad bulsheed oo aad iska hubiso bandhigyada telefishanka, filimada, iyo muusikada.
Google TV - Soo ogow waxyaabo aad u fiican si aad u daawato haddii ay tahay TV-ga tooska ah ama shabakadda, iyadoo si dhakhso leh loo helayo iyo talooyin shakhsi ahaaneed oo laga helayo ilo badan oo mawduucyo ah.
Qalabka dijitaalka ah - wuxuu awood u siinayaa u-beddelashada war-baahinta dhaqameed TV-ga ballaadhiyaha leh ee muuqaalka badan leh, tooska ama dalbashada xalka fiidiyowga.
Miso - dhisida khibrad shaashad labaad iyo madal cusub oo hal abuur leh.
Rovi - waxay awood siineysaa xakamaynta nidaamka nuxurka abuurista ilaa qaybinta-waxayna si toos ah ugu gudbineysaa warbaahintaada dhijitaalka ah macaamiisha markay rabaan, barnaamijyada iyo aaladaha kala duwan.
SnappyTV - waa fududahay in la isticmaalo, barxad awood badan oo ka dhigaysa durdurro toos ah iyo TV-ga baahinta bulshada, moobiilka iyo fayraska.
TVcheck - waqtigan xaadirka ah Boqortooyada Midowday, TVcheck waa hab bilaash ah, madadaalo ah oo fudud oo lagula wadaagi karo jacaylkaaga TV, looguna guuleysto abaalmarino iyo in lala kulmo saaxiibbadaa - iyadoo aan la carqaladeynaynin daawashadaada.
WiOffer - Ka hel telefishanka gaarka loo leeyahay iyo raadiyaha WiOffers taleefankaaga casriga ah ama kiniinigaaga.
Xbox LIVE - TV-gaaga ayaa loo beddelay waayo-aragnimo madadaalo oo ku xiran Xbox LIVE. Ciyaar Kinect iyo cayaaraha xakamaynta asxaabta khadka tooska ah meelkasta oo ay joogaan ama isla markiiba daawadaan filimada HD, bandhigyada TV-ga iyo isboortiga.
YapTV - la wadaag daawashadaada telefishanka Twitter iyo Facebook.
Adiga - Youtoo waa labadaba shabakad bulsheed iyo telefishan leh tiknoolajiyad casri ah oo ka dhigaysa inay wada shaqeeyaan.
Mid ka mid ah tikniyoolajiyada xiisaha leh ee shaashadaha labaad ee hadda la tijaabinayo ayaa ah sawirka faraha. Intaad telefishanka ku daawanayso aaladda mobilada ama kaniiniga, dalabku wuu socdaa waana farahaaga bandhigga telefishanka, filimka ama ciyaarida ganacsiga oo si otomaatig ah u leh khibrad is-dhexgal ah shaashaddaada labaad.
Tags: Feedhyahankalluunkaclipsyncgetgluexirmo dijitaal ahFiidiyowyada SuuqgeyntaMISOsnappytvtelefishanka bulshadasocialtvtelevisionxbox liveyoutoo